/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); Running Wait Zar fromaUSB Drive with Pstart | WaitZar User's Guide /g,'>').replace(/"/g,'"'),data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u1039]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if(data != data_escaped)$(this).replaceWith(data); }); }); //]]>
Running Wait Zar fromaUSB Drive with Pstart
ဝိဇ္ဇာသည် USB drive တစ်ခုအတွင်း​မှလည်း​ေကာင်း​စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ထို့​ေြကာင့်​ အင်တာနက်က​ေဖး​ဆိုင်များ​ အပါအဝင် မည်သည့်​ အများ​သံုး​ ကွန်ပျူတာများ​တွင် မဆို အလွယ်တကူ သယ်ယူ အသံုး​ြပုနိုင်ပါသည်။ သို့​ေသာ် သင့်​အ​ေနြဖင့်​ အလွန်လွယ်ကူသက်သာစွာ အဆင်သင့်​ အသံုး​ြပုလိုပါက PStart ကို အသံုး​ြပုသင့်​ပါသည်။
(မှတ်ချက် - PStart ပရိုဂရမ်မှာ USB drive များ​အတွက် မီနူး​ြပုလုပ်​ေပး​သည့်​ အသင့်​သံုး​ပရိုဂရမ်ငယ် တစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။)
မှတ်သား​ရန် အချက်တစ်ခုမှာ ဤနည်း​လမ်း​ကို မသံုး​လည်း​ရပါသည်။ (completely optional)။ ထို့​ြပင် PStart သည် ဝိဇ္ဇာ ပ​ေရာဂျက်နှင့်​လည်း​ လံုး​ဝဆက်စပ် သက်ဆိုင်ြခင်း​ မရှိပါ။
ဝိဇ္ဇာကို PStart တွင် အသံုး​ြပုလိုပါက ​ေအာက်ပါအတိုင်း​ လုပ်​ေဆာင်ရပါမည်။
1. PStart ရိုး​ရိုး​ဗား​ရှင်း​ကို ​ေအာက်ပါလိပ်စာမှ ရယူပါ။ ( U-3 ဗား​ရှင်း​ မဟုတ်ပါ)
2. သင်၏ USB drive ကို ကွန်ပျူတာတွင် တပ်ဆင်ထား​ြပီး​ PStart setup ဖိုင်ကို run ပါ။ ​ေပါ်လာသည့်​ ဝင်း​ဒိုး​ မှ “Setup Type” တွင် “Portable Setup” ကို ​ေရွး​ပါ။ ထို့​ေနာက် သင့်​ USB drive ၏ drive’s letter ကို ​ေရွး​ပါ။
3. ယခု ဆက်လက်ြပီး​ သင်၏ USB drive ကိုဖွင့်​ပါ။ “waitzar” အမည်ြဖင့်​ folderတစ်ခု ြပုလုပ်ြပီး​ ​ေဒါင်း​လုတ် ရယူထား​သည့်​ ဝိဇ္ဇာ ဖိုင်များ​ကို ြဖည် (extract or unzipသမ) ထည့်​ပါ။ နမူနာ အ​ေနြဖင့်​ USB drive တစ်ခုအတွင်း​ ဖန်တီး​ထား​သည့်​ “waitzar” folder တစ်ခုကို ​ေအာက်ပံုတွင် ြကည့်​နိုင်ပါသည်။
4. ယခုဆက်လက်၍ USB drive ၏ root folder ထဲရှိ “PStart.exe” ဖိုင်ကို click လုပ်ပါ။ PStart window ​ေပါ်လာသည့်​အခါ “Edit” ကိုနှိပ်ြပီး​၊​ ဆက်လက်၍ “Add File” ကို နှိပ်ပါ။ ​ေပါ်လာသည့်​ browse window မှတဆင့်​ - အဆင့်​ ၃ တွင်ဖန်တီး​ခဲ့​သည့်​ “waitzar” folder သို့​ ြပန်သွား​ြပီး​“WaitZar.exe” ကို double-click လုပ်ပါ။ ဝင်း​ဒိုး​အသစ်တစ်ခု ​ေပါ်လာပါက “Ok” ကို click လုပ်ပါ။ ယခုအခါ PStart ဝင်း​ဒိုး​ကို ပိတ်နိုင်ြပီ ြဖစ်သည်။
5. Pstart ပရိုဂရမ် အလုပ်လုပ်​ေနသမျှ ကာလပတ်လံုး​ system tray ရှိ ၎င်း၏icon ကို click လုပ်ကာ ​ေပါ်လာသည့်​ မီနူး​မှ“WaitZar” ကို​ေရွး​ြပီး​ ဝိဇ္ဇာ ပရိုဂရမ်ကို အလွယ်တကူ စတင်အသံုး​ြပု နိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။ သင့်​အ​ေနြဖင့်​ သင်၏ USB drive ထဲရှိ အြခား​ေသာ ပရိုဂရမ်များ​ကိုလည်း​ PStart ထဲသို့​ထပ်ထည့်​နိုင်ပါသည်။ ဤသို့​ ထည့်​သံုး​ြခင်း​ြဖင့်​ သင့်​ USB drive နှင့်​ချိတ်ဆက် အသံုး​ြပုသည့်​ မည်သည့်​ ကွန်ပျူတာတွင် မဆို လုပ်​ေဆာင်ချက်အြပည့်​အဝ ပါသည့်​ ကိုယ်ပိုင် mini Start Menu တစ်ခုကို အသံုး​ြပုနိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
စာ​ညွှန်း​​။​​ ​။​ Drive, USB, ခရီးေဆာင်
No Response to "Running Wait Zar fromaUSB Drive with Pstart"